Jubbaland oo walaac ka muujisay doodaha ka socda Golaha Shacabka | Universal Somali TV
Jubbaland oo walaac ka muujisay doodaha ka socda Golaha Shacabka
Jubbaland ayaa waxay taageertay warkii ka soo yeeray Gudoomiyaha Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Somaliya, Cabdi Xaasi Cabdullaahi, ee ku aadanaa in wax laga bedelay xeerarka ay ka doodayan Golaha Shacabka, xeerarkaa oo qaarkood ay ansixiyeen.
Gudoomiyaha Golaha Shacabka ayaa sheegay in xeerarka loo gudbiyay Golaha Shacabka aysan ahayn kuwii loo soo gudbiyay Guddoonka Labada Aqal, taasoo aan waafaqsanayn sharciga.
Gudoomiye Xaashi ayaa Guddiga Doorashooyinka Qaranka ugu baaqay inaanay isticmaalin xeerarkii maalmihii ugu dambeeyay la ansixiyay iyo kuwa ay iminka doodoodu socoto.
Warsaxaafadeed saqdii dhexe ee xalay ka soo baxay Madaxtooyada Jubbaland ayaa lagu yiri "Dowladda Federaalka Somaliya waxay ku dhisan tahay nidaam iyo dastuur ku saleysan hab federaali ah. Hadaba, maadaama Aqalka Sare uu yahay Golaha Sharci-dejinta ee Dowlad Goboleedyada ku metela nidaamka federaaliga ah, qaraarka ka soo baxay Gudoomiyaha Aqalka Sare waxa uu ka tarjumayaa arrimo masiiri ah, oo saamayn ku leh Dowlad Goboleedyada uu Aqalka Sare wakiilka ka yahay."
Warsaxaafadeedka waxaa kaloo lagu yiri "Sidaa darteed, Dowlad Goboleedka Jubbaland waxay soo dhaweyneysaa qaraarka uu soo saaray Gudoomiyaha Aqalka Sare, Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi ee tix-raaciisu ahaa XG/428/B-10/20, ujeedadiisuna ahayd ka falcelinta xeerar been abuur ku saleysan oo ansixintooda ka shaqeynayeen qaar ka mida xubnaha Golaha Shacabka ee Federaalka."
Jubbaland ayaa dalbatay in la hakiyo akhriska, ka doodista iyo u codeynta dhammaan xeerarka ku xusan warqadda uu soo saaray Cabdi Xaashi Cabdullaahi, Gudoomiyaa Golaha Aqalka Sare iyo xeer walba oo saamayn ku leh hannaanka doorashada ee heer federaal.
Kan-xigaPuntland oo ka falcelisay warkii Gudo...
Kan-horeVilla Somalia oo muddeysay shirka Mad...
54,017,211 unique visits